Caramelicious mbanje ndeye chiratidzo-sativa chakayambuka chisinganzwisisike mavambo. Indica kutonga kunoonekwa mukati mayo yepakati-renji kukwirira uye ine rupo kwazvo goho (yakakura bud-kune-mashizha chiyero). Rake sativa divi rinopa inotapira kuravira. Caramelicious mbanje ndiyo nyeredzi iri kubuda padanho rekurima mbanje dzemazuva ano, kunyanya pakati pevarimi vembanje vekutengesa. Anochinjika nyore nyore kune kwaanogara, saka nekutarisira kushoma iwe unogona kutarisira kuti asvike pakukora pasi peanenge mamiriro ese ezvinhu. Caramelicious isarudzo yakanaka kwazvo kekutanga uye varimi vembanje vembanje. Yakasimba uye yakapusa kubata, Caramelicious inokura nemufaro mumba. Varimi vatsva vachanakidzwa nekumuona achikura yake hombe yepakati cola (yepamusoro bud), akatakurwa nemavhudzi akanaka eorenji, makristasi eTHC, uye inonamira resin. Caramelicious inonyatsotumidzwa zita rekuti inotapira-senge hwema hwekamera uye kuravira kwaanogadzira. Hutsi hwake husina kutsetseka hunopedzisa munonaka inotapira hunogona kuve hwaunofarira mushure mekudya kwemanheru. Caramelicious inopa yakazara chiratidzo chiratidzo chakatemwa nemuviri buzz iyo inosanganisira kushomeka kushoma kwesativa yakasimudzwa kumusoro.